Iintsomi zaseSeville, ukusuka kwimvelaphi yezitalato zayo ukuya ePedro el Cruel | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 22/04/2021 13:02 | isiko, Sevilla
ISeville yindawo efanelekileyo kubathandi benkcubeko, ukongeza kwizinto ezingapheliyo izicwangciso onokuzenza esixekweni, amabali abo kunye neentsomi zininzi njengoko zintle kwaye ziyamangalisa. Qaphela ukuba imvelaphi yayo ibuyela ubuncinci kwisixeko saseRoma I-Hispalis Yasekwa ngu UJulius Caesar kwinkulungwane yokuqala BC.
Njengokuba oko kwakungonelanga, idolophu yaseAndalusiya yayonwabele ukomelela okukhulu kumaxesha aphakathi, xa yaphinda yanabemi abasemagunyeni baseCastilian emva kokuba boyisiwe kwakhona UFerdinand III oNgcwele Kwaye ngakumbi nangakumbi ngexesha lika Austrias, xa yaba lizibuko lokuqala lezorhwebo kunye nehlabathi elitsha kunye neziko lezoqoqosho lobukhosi baseSpain. Imbali etyebileyo enjalo kuye kwafuneka ukuba ivelise amabali amaninzi aqhelekileyo. Ke ngoko, ukuba ufuna ukwazi ifayile ye- Iintsomi zaseSeville, siza kukuxelela ezinye zezona zinomdla kakhulu.
1 Ibali likaSusona omhle
2 UDoña María Coronel kunye neoyile ebilayo
3 Intloko kaKing Pedro I, umntu obalaseleyo kwiintsomi zaseSeville
4 Indoda yelitye
5 Imbali yePuppy, yeklasikhi phakathi kwamabali aseSeville
6 Igosa likaCalle Sierpes
Ibali likaSusona omhle
Ixesha elidlulileyo elinobundlobongela lesixeko liyavela kweli bali liyinxalenye yeentsomi zaseSeville. Emuva kumaXesha Aphakathi, kwabakho uhlaselo kwikota yamaJuda yaseSeville kwaye, ekuphenduleni, amaJuda enza iyelenqe namaMoor ukufumana ulawulo lwesixeko.
Ukulungiselela isicwangciso, badibana kwindlu yebhanki UDiego Susón, Ontombi yakhe yayidume ngobuhle bayo yonke loo ndawo. Kwabizwa USusana Ben Susón kwaye wayengene kubudlelwane obusithelene nenene eliselula elingumKristu.
Kuba iyelenqe lalenziwe ekhayeni lakhe, wayeyazi ngokwakhe into ezakuqulatha. Icebo yayikukubulala iingcungcu eziphambili zedolophu. Kwaye, esoyika ubomi besithandwa sakhe, waya kumxelela ukuba kwenzeke ntoni. Khange aqonde ukuba, ngokwenza njalo, ubeka usapho lwakhe kunye nawo onke amaSevillian engozini.
Umnumzana khange athathe thuba lide ukulumkisa abasemagunyeni ngeli yelenqe, eyalele ukuba kubanjwe iinkokheli zeli yelenqe, kubandakanya notata kaSusona. Baxhonywa iintsuku ezimbalwa kwi Tablada, indawo apho abona bantu babesona sixeko babulawa khona.
USusona umele ithayile kwipaki yaseMaría Luisa eSeville
Umfazi omncinci walahlwa ngabantu bakowabo, ababemthatha njengomngcatshi, kunye nendoda awayolala nayo. Kwaye, ukusuka apha, ilivo inikezela ngeenguqulelo ezimbini. Ngokwokuqala, wacela uncedo kumlawuli omkhulu wecawe enkulu, UReginaldo waseToledo, owamkhulula waza wangenelela ukuze athathe umhlala phantsi kwikhaya loonongendi. Kwelinye icala, owesibini uthi wayenabantwana ababini kunye nobhishophu kwaye, emva kokwaliwa nguye, waba ngumthandi kasomashishini waseSevillian.
Nangona kunjalo, ilivo liyadityaniswa kwakhona esiphelweni. Ukusweleka kukaSusona, umyolelo wakhe wavulwa. Uthe unqwenela njalo intloko yakhe yanqunyulwa kwaye yabekwa emnyango wendlu yakhe njengobungqina bentlungu yakhe. Usenokubona namhlanje, ukuba uya kudlula ukufa street, ithayile enokhakhayi apho bekuya kuba likhaya likaSusona. Ngapha koko, loo ndlela iyaziwa ngegama lentombazana.
UDoña María Coronel kunye neoyile ebilayo
Eli bali lisuka eSeville linezinto ezininzi ezenziwa kwisepha opera, ngakumbi uthando kunye nomnqweno wokuziphindezela. Ukongeza, kusisa kumaxesha oloyiso lwesixeko. UNksk Maria Coronel Wayeyintombazana eyintombazana yaseCastilian UMnu Alfonso Fernández Coronel, owayengumxhasi we UAlfonso XI waseCastile. Utshatile nguJuan de la Cerda, owathi ke walwela phakathi kwabakhuseli bonyana wakhe, UHenry II, xa wayejongana notata wakhe wesibini UPedro I ukulandelelana kwetrone.
Ngesi sizathu, owokugqibela wabulala u-Juan de la Cerda kwaye wabamba zonke iimpahla zakhe, eshiya umhlolokazi wakhe etshabalala. UPedro ndandingamazi ngokobuqu, kodwa xa wambonayo, wayenguye ndithandana naye. Nangona kunjalo, u-Doña María Coronel wayengazimiselanga ukunxibelelana nomntu owayeyalele ukubulawa komyeni wakhe wangena kwi-Sevillian convent Santa Clara.
Nokuba kunjalo akazange afumane uPedro I, okwabizwa ngokuba ngu "Ukhohlakele," ukuba anikezele kumzamo wakhe wokuba lishweshwe. Kude kube lusuku olunye, ondliwe sisigcini sakhe sasebukhosini, wangena ekhitshini konongendi kugalelwe ioyile ebilayo ngaphaya kobuso ukuyonakalisa. Ngale ndlela wakwazi ukwenza uPedro I ukuba amshiye yedwa.
Indibano yeSanta Inés
Wayesakwazi ukubona ukusweleka kwenkosi ezandleni zomninawa wakhe u-Enrique II, owabuyisela impahla ethathiweyo koodade baseCoronel ngenxa yokuhlala ethembekile kwinjongo yabo. Ke, la manenekazi mabini akwazi ukuyifumana Umzi woonongendi baseSanta Inés kwibhotwe ebelikayise. Ukuphulukana kokuqala kuya kuba, ngokuchanekileyo, uDoña María Coronel, owafa malunga ne-1411.
Intloko kaKing Pedro I, umntu obalaseleyo kwiintsomi zaseSeville
Ngokuchanekileyo inkosi ekhohlakeleyo yaseCastilian ikwanenkwenkwezi kwezinye iimbali zaseSeville. Umzekelo, le siza kukubalisela yona. Ngexesha lokuhamba kwakhe ebusuku esixekweni, uPedro wadibana Bala unyana kaNiebla, usapho olwaluxhasa UHenry II, njengoko besesikuxelele utat'omntakwabo. Akuzange kube kudala kuphuma amakrele kwaza kwafika omnye umntu okhohlakeleyo.
Nangona kunjalo, i-duel yavuka ixhegokazi Ukrobe ngesibane kwaye, othukile akuba emazi umbulali, wabuya wayozivalela endlwini yakhe, ngaphandle kokulahla isibane ebesiphethe phantsi. U-Pedro ohanahanisayo wathembisa usapho lwexhoba ukuba Ndiza kuyinqumla intloko yalowo unetyala yokusweleka kwakhe kwaye ukuyiveza esidlangalaleni.
Ukwazi ukuba ubonwe lixhegwazana, wambizela phambi kwakhe embuza ukuba ungubani na. Umfazi wabeka isipili phambi kwenkosi wathi "unombulali apho." Emva koko, uDon Pedro wayalela ukuba inqunyulwe intloko omnye wemifanekiso eqingqiweyo yemabhile bahlonipha kuye kwaye wabekwa kwindawo yomthi. Uye wayalela ukuba ibhokisi ishiywe kwakwisitalato esinye apho kwenzeke khona umsitho wobundlobongela, kodwa mayingavulwa de kubhubhe yena.
Nanamhlanje ungasibona eso siphithiphithi esitratweni sibizwa, ngokuchanekileyo, INtloko kaKing Don Pedro. Kwaye, ukukhumbula le nto idumileyo, leya ichaseneyo, apho ahlala khona amangqina, ibizwa Isitrato seCandil.
Intloko kaKumkani uDon Pedro
Siyaqhubeka kumaXesha Aphakathi ukuba sithethe malunga nelinye ilivo laseSeville. Isixelela ukuba, ngenkulungwane ye-XNUMX, babekhona Indawo yokutyela kwi Isitalato sobuso obuhle, eyeyommandla wase San Lorenzo, apho abantu beentlobo zonke bema khona.
Ke, yayiqhelekile into yokuba, njenge Isakramente elisikelelekileyo, abantu baguqa ngamadolo. Xa iqela labahlobo ebharini lamva esondela, baphuma baguqa ngamadolo xa umngcelele wawudlula. Konke kodwa inye. Umnxeba UMateyu «el Rubio» wayefuna ukuba ngumlinganiswa ophambili kwaye, etyhola abahlobo bakhe ngokusikelelwa, wathi ngokuvakalayo akazange aguqe.
Kanye ngalo mzuzu, a ukukhanya kukaThixo wawela ngelishwa uMateo ejika umzimba wakhe waba lilitye. Nanamhlanje unokubona isidumbu sendoda kweso sixhobo sinxitywe kukuhamba kwexesha kwisitalato saseBuen Rostro, ekubizwe njalo ukusukela ngoko, Indoda eyitye.
Imbali yePuppy, yeklasikhi phakathi kwamabali aseSeville
Ukuba sele utyelele isixeko saseAndalusi, uya kwazi kakuhle ukuba kubaluleke kangakanani kubemi baso Triana injana, igama ababhaptize ngalo abantu UKristu wokuphelelwa lixesha. Rhoqo ngeVeki eNgcwele ubuzalwana bakhe bumsa kumngcelele ovela kwicawa yabo ejikelezwe ngumoya obalaseleyo.
Akunakusothusa, ke, ukuba phakathi kwamabali aseSeville kukho uninzi oluneli nani njengomlinganiswa ophambili. Enye yezona zidume kakhulu yile siza kukuxelela ngayo ngezantsi.
Isixelela ukuba inkwenkwe ye-gypsy ibizwa ngokuchanekileyo Injana Ndadlula kwibhulorho iBarcas yonke imihla ukusuka eTriana, emva koko ihlomela isixeko, ukuya eSeville. Omnye wabantu ababembona esenza olo khenketho waqala wakrokrela ukuba wayezokundwendwela owakhe umfazi. Oko kukuthi, wayenobudlelwane bokwenyama naye.
UKrestu wokuphelelwa lixesha, eyaziwa ngokuba yi "Puppy"
Ngenye imini, wamlinda ecaleni kwentengiso kaVela kwaye wamhlaba izihlandlo ezisixhenxe. Abantu abaliqela beza kukhwaza le nkwenkwe kwaye babengenakuphepha uhlaselo. Phakathi kwabo kwakukho nomkroli UFrancisco Ruiz GijónNgubani oya kuthi ekugqibeleni abe ngumbhali womfanekiso kaKristu wokuphelelwa lixesha.
Kuthiwa yena, wothuswa yintlungu yomfana, wakhuthazwa bubuso bakhe ukuba aqingqe loo kaKristu udumileyo. Ngendlela, wayengazukundwendwela umfazi wombulali, kodwa ngudade ekungekho mntu waziyo ukuba iintlanganiso zabo zaziyimfihlo.
Igosa likaCalle Sierpes
Esi sitrato sisesinye sezona zidume kakhulu eSeville, kodwa ayingabo bonke abemi besixeko abasaziyo isizathu segama laso, esikwabakho nentsomi yaseSeville. Bathetha oko, phaya emva kwinkulungwane ye-XNUMX, kwinto eyayibizwa ngelo xesha Espalderos isitalato Abantwana baqala ukunyamalala ngaphandle kwesizathu.
Khange baphinde baviwe kwaye le meko imbi kangaka yabangela ukuphaku phakathi kwabemi bommandla. Umlawuli weSeville, UAlfonso de Cárdenas, Andazi ukuba ndenzeni. Kude kube ibanjwa linikezele ngokusombulula le mfihlakalo endaweni yenkululeko yalo.
Era IMelchor de Quintana Wayesentolongweni ngenxa yokuba nenxaxheba kwimvukelo yokumkani. Ummeli wamkela kwaye emva koko umntu ogwetyiweyo wamkhokelela kwindawo apho kwakukho inyoka enkulu malunga neenyawo ezingamashumi amabini ubude. Yayinamkhonto kuyo kwaye ifile. KwakunguMelchior ngokwakhe owayejongene naye wambulala.
Inyoka okanye inyoka yaboniswa eCalle Espalderos ukuqinisekisa abemi bayo. Kuthiwa beza kuyibona bevela kuyo yonke imimandla yesixeko kwaye, ukusukela ngoko, isitalato sabizwa yeeSierpes.
Ukuqukumbela, sikubonise awona mabali athandwayo aseSeville. Zininzi ezinye ezifana UKristu waMandla amakhulu, ze ISanta Librada okanye eye Abangcwele uJusta kunye noRufina. Kodwa la mabali aya kushiyelwa elinye ixesha. Ukuba usedolophini, wonwabe. Siyakushiya Kule khonkco uluhlu olunezinto onokuzenza ukusuka eSeville ukuba unalo ixesha lokujonga indawo engqongileyo, awuyi kuzisola!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Spain izixeko » Sevilla » Iintsomi zaseSeville